Xiinxalaan warra Kaabaa tokko dhimma keessoo keenyaarratti waan jedhe kana yoo dhageessan maal jettu laata? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsXiinxalaan warra Kaabaa tokko dhimma keessoo keenyaarratti waan jedhe kana yoo dhageessan maal jettu laata?
Xiinxalaan warra Kaabaa tokko dhimma keessoo keenyaarratti waan jedhe kana yoo dhageessan maal jettu laata? Akka itti alagaan nuuf qophaahaa jiru kana argee kan of hin sirreessine yoo jiraate Oromoon deebii haa kennuuf.
“Aangoon biyyoolessaa Oromoo harka galeera jennee abdii murachuun dogoggora. Akkaataa jaraa dhihootti hordofaa jirra. Amma garee sadi qabu. Gareen tokko isa aangoo irra jiru. Kan lammaffaa isa qawwee baatee Wallagga jiru. Inni sadaffaa kan gidduu dhaabate. Sadanuu akka itti wal kuffisanii inni tokko lamaan hafan dadhabsiisee aangoo jabeeffatuuf keessaan wal qabanii jirani. Afaaniin waa’ee nagaa fi araaraa guyyaa guyyaatti dubbatu. Garuu guyyaa irraa guyyaatti dhiiga walitti danfaa deemaa jiru. Ammas itti dhiheenyatti hordofna. Nuti ammoo akka itti gareen sadanuu wal dadhabsiiftee taphaan ala taatu irratti hojjechuun amma irraa eegaluu qaba.”
Dubbiin Habeshota: The best way to eat the elephant standing in your path is to cut it up into little pieces. ~ African Proverb
Dabballoonni/aktivistoonni Wayyaanee wixinee haaraa dhimma ”Komishiinii Dhimmoota Daangaa Bulchiinsaa fi Eenyummaa (የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን) jedhamu qabattee duula tokko eegalteetti. Wixineen kun kan ragga’u yoo tahe lafoonni Gaambeellaa, BeniShangul, Tigraay, Afar, Somaalee, Dirre Dhawaa, Hararii fi hanga tokkos Naannoo Kibbaa muramanii irraa fudhatamuuf deemu jechuun olola oofaa jiru. Ummatoota bulchiinsota maqaa dhahamanii kanas olola akkasii itti buufuudhaan mootummaa irratti kakaasuuf hojjechaa jiru. Wixineen kun akka hin dabarreef miseensota Tigraay bakka bu’anii Mana Maree Federeshinaa keessa jiraniif xalayaa barreessanii jiru. Wixinee kana karaa dandeessaniin fashalsiisaa yookiis murtee sana dhiitaa bahaa jechuun waywaachaa jiru. Mootummaan dhimma wixinee kanaa irratti maal yaade? Wanti yaadame maal akka tahe iftoominaan osoo ummata hin beeksufne yoo sochiitti seename cittoo irratti fanxoo nutti tahuu waan maluuf dursaa itti yaadaa.
opdon akkanat uumata keenya fixe haramo tayitara turuf nutti munadi lamam magarsa kondom tplf
Shamareen tunni akkasi jette rakkoo irraa gahee dubbatee ”Ana dabalatee hojjettoota 153tu harki irraa murame. Ammallee warshichi nama miidhuu hin dhiifne.” Hojjettuu duraanii warshaa gogaa Freendship – (Magaala Mojoo)
Seid Haji Badhasso
Ethiopia: ኦነግ በኦሮሚያ ነጻ መሬት እንዳለው ይፋ አደረገ… ዶ/ር መረራ ጉዲና እና ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ለበረከት ስምዖን እና ስብሃት ነጋ ምላሽ ሰጡ